Fanampiny mozika malefaka marefo Fanampin-kiran-tanana mipetaka mafy Kitapo marevaka Light for Edc
♥ Afaka amin'ny loko 7 ary azonao atao koa ny mampifanaraka ny loko tianao indrindra. ♥ Mampiasa LED LED miaraka amin'i 5h. ♥ Powered by AG10x10 batterie, izay ...
♥ Mampiasa COB LED, miaraka amina rindran-ka hatramin'ny 150 lumens. ♥ Powered by pilamable 2200 mAh batteries Li-ion sy ora 12 ora. ♥ Motion Sensor switch ...
1000lm 4 × 18650 Battery Popular Camping Wireless Speaker LED Lantern with Power Bank
♥ Multiple Colors, Wireless Music Playing, mitondra tahony ♥ 15PCS SMD 2835 LED, 3 Miasa Ireo fomba ♥ 4x18650 (3.7V 2200mAh) Lithium Batteries, dia azo ampiasaina ho toy ny hery ...
Multi-Functional Handsize Thumb Switching 1w Car Plug Charging Flashlight For Vehicle
♥ Auto automatizable amin'ny fiara rehetra an'ny fiara mitondra 12Volt na 24Volt. ♥ Manazava ny LED 1W, miaraka amin'ny mari-pamantarana famandrihana ao an-doha. ♥ Ny lanjany mahomby indrindra dia ahafahana mamoaka ny ampahany betsaka indrindra ...
173 lumen flexible bluetooth mpilalao portable amin'ny port usb
Product Features: 1) Item No.: SCB-1513 2) Material: ABS + Aluminum Alloy + Steel Meshes 3) Surface Finishing: Silver Sandblasting Anodized & Painting 4) Flashlight: China 1W Camping Lamp: F5 Round (0.1W) * 6 5 ) 3.7V 1800mAh ...
Amin'ny ankapobeny, ny loko fotsy LED dia azo zaraina amin'ny hazavana fotsy (manodidina ny loko 6500K), fotsy tsy misy fotony (manodidina ny 4000k) ary fotsy fotsy (manodidina ny 3000K).
Nahoana isika no mila manao fizarazarana toy izany? Mba hamaliana izany fanontaniana izany dia ilaintsika ny mahafantatra ny antsoina hoe "loko miloko". Ny famerenana loko, izay aseho avy amin'ny 0 ka hatramin'ny 100 ao amin'ny Color Rendering Index (CRI), dia mamaritra ny fomba loharanom-pahazavana mahatonga ny lokon'ny zavatra iray miseho amin'ny mason'ny olona ary koa ny fiovan'ny karazana loko marevaka. Ny avo kokoa ny fiheveran'ny CRI, ny tsara kokoa ny fahaiza-manaon'ny loko. Ny CRI dia mitazona ny 75% (avo lenta ny loko fotsy, mampidina ny CRI), raha ny fotsy kosa ny fotsy fotsy ary ny fotsy ny fotsy miloko fotsy dia manodidina ny 80%.
Inona ireo dikany ireo ho antsika? Ohatra, amin'ny fahavokarana, ny famirapiratan'ny jiro maivana dia avo lenta mba hahafantarana ny fifandanjan'ny lohahevitra, saingy ny antsipirihan'ny lohahevitra sy ny fandaharam-potoana dia mila CRI hahafantarana. Izany hoe ny hoe "Fahazavana" fotsiny dia afaka manampy amin'ny fametahana ny fifandirana mifamaly. Fa raha ny fitsarana ny loko, ny antsipiriany sy ny fizaram-potoana, dia mitaky ny CRI amin'ny 75% (raha tsy ilaina ny fanakanana ny maso sy ny fampandrosoana, 135% dia ilaina.) Haka ny loko 100% mamelatra ny tsipiky ny hazavana. Izany no mahatonga anay hanohy hatrany ny CRI.
Ny fitsipika manazava ny LED hazavana fotsy dia toy izao: ny electron dia mamakivaky ireo poti-pamokarana mba hanairana ny hazavana manga, ary avy eo dia mientanentana ny poofa fluorescent mba hamoaka ny jiro mavo, farany ny hazavana roa mifangaro amin'ny jiro fotsy. Ny CRI mahery dia avo kokoa noho ny hazavana manga, noho izany ny fampiakarana ny ampahany amin'ny jiro mavo dia afaka manandratra ny CRI. Amin'io lafiny io, ny hafanana ny loko maivana, ny avo kokoa ny CRI ary mety kokoa ho an'ny fanatanjahan-tena ivelan'ny trano. Ankoatr'izany, ny loko mafin'ny hafanana matevina sy ny lavany lava lava dia mamela azy hanana faharetana bebe kokoa amin'ny toetry ny orana sy ny orana. Izany no mahatonga ny fanatanjahantena an-kalamanjana mitaky loko maivana miloko LED.
Etsy andaniny, ny fahombiazan'ny fluorescence fientanam-po dia tena ambany, ny hafanana mazava fotsy ny hazavana manjavozavo dia ho ambany noho ny loko maivana kokoa. Ny 'beye' dia handentika "ny lohahevitra" toy ny hoe manazava ny jirom-bory kely manjelatra. Amin'ny fiteny tsy miangatra, ny vokatra LED LED dia ny safidy tsara ho an'ny fanatanjahantena an-kalamanjana izay tsy vitan'ny fanamafisana ny loko sy ny fahaiza-manaony, fa koa misoroka ny fihenan-java-manahirana sy ny faharetana.